RUWAAYADDII DEEQO DOOKH MA LEEDAHAY Q-5AAD W/A: Muxyaddiin Xuaeen Ciid | Laashin iyo Hal-abuur
RUWAAYADDII DEEQO DOOKH MA LEEDAHAY Q-5AAD W/A: Muxyaddiin Xuaeen Ciid
RUWAAYADDII DEEQO DOOKH MA LEEDAHAY Q-5AAD
Anagaa ku siin
Saakadan aan joogno
Subax noolba aahayd
Ee marka hore saaxiiboow
Sannadkee naga socdaashay?
Daacad: Gugii deeqa la’la aqal galay.
Faras: Aqalgalkii odeygii deeqa loo soo hambaabulay.
Faras: Xilligaas waxaan ugu yeernaa dararso oo odeyga iyo Deeqa waa loo hanwaynaa oo waxaa la is lahaa odeygu mid iyo labo waa ka dhali donaa Deeqo, dadkuna waa u hanwaynaa, jacaylka gabarta iyo odeyga waa loo sacaba tumayay, inkastoo uu haraati watay.
Daacad: Waan gartay!
Faras: Xili dagganaansho loo baxshay ayaa raacay oo Deeqo duq cusub ku baddalatay kii hore ayaa xigay, dabayshuse ma xoog badnayn, waad taqaannaayoo doomuhu dabaysha waa ku xisaabtamaan, marka dabayl la’aan baa jirtay xilligaas, Deeqana waa is calfan waayeen odeygiidii cusbaa, waana kala hadaafeen, maxayse kuugu taal maalinba mid baa u soo hulaabanayay Deeqa, ayana dhal raadis bay ahaydoo wax ma diidayn.
Faras: Dee maantana waad noo timidoo, Odeygii Xaaji Daadihiye ahaa iyo Deeqo, waa ka dhex curatay, furriin bayna dalbatay, Xaajiguna ma oggala oo gabadha jacayl daran buu u qaaday, darbigaad martaba hadalkoodaa lagu hayaa. Ragna waa soo kacay markii ay maqleen in gabadhii Deeqo ahayd mar kale guudka firan doonto. Dhinaca kalema Maandeeq iyo dirkeedii wali dabkii kama bakhtiin. Dahabo oo Deeqa ka waynayd, darisna ay ahaayeen dab ma kala qaataan. Saaxiiboow dayaca kalena waa iska badan yahay. Aniga iyo Feyflana rag waalan baa naloo yaqaan, xaal halkaas ayuu marayaaye adigu maxaad nagu siyaadin.
War idinkaa dhameeyay
Waa i dhaawacayoo
Qalbiguu i dhalaashay
Mar haddii dhulkeennii
Iyo Dhiigga dadkeennii
Qiima dhacaas uuba joogo
Wax kaleeto dhihi maayee
Rabbi aaban dhankiisa
Iyo dhawaanno xaggiisa
Toobadna aan ku dhawaaqno.
Heesta GUULLOOW ayaaa Daacad ku dhufanayaa, Feyle iyo Farasna waa la jiibinayaan:
Guulloow garab iyo Gargaarbaan
Guulloow geyigay u rabaa.
Guulloow Gedo iyo Gabileey
Guulloow Ummaddaa gowriirta
Guulloow garab baan u rabaa
Guulloow Saylac iyo Ganaane
Guulloow gacan baan u rabaa
Guulloow Gaalkacyo iyo Banaadir
Guulloow Calankiinii gob ahaa
Guulloow Arligaa gubanaaya
Guulloow Hooyadaa gablamaysa
Guulloow Gowracaa cadowgayga
Guulloow Gaajadiyo halaagga
Guulloow Gulufkiyo colaadda
Guulloow gargaar baan u rabaa
Guulloow goof ma reebto abaar ah
Guulloow galinsii Ummaddeyda
Guulloow garashiyo samahoo
Guulloow garabkooda ahoow!.
W/A: Muxyaddiin Xuseen Ciid